5 Waxyaabaha ku jira Fayraska | Martech Zone
Sabtida, Juun 6, 2013 Axad, Juun 7, 2013 Douglas Karr
Dadka wanaagsan ee Baraha Bulshada ku dheji faahfaahin dheeri ah, 5 Waxyaabaha Muhiimka ah ee Nuxurka Fayraska, laga bilaabo La-tashiga Isgoyska.
Shakhsi ahaan, ma jecli erayga fayras ee ku saabsan sawir-gacmeedkan… Waan jeclahay ereyga la wadaagi karo. Marar badan waad ka badnaan kartaa waxyaabaha laga filayo shay kasta oo muhiim ah oo ka mid ah boggan - laakiin macnaheedu maahan inay faafayso.
Leo Widrich oo ku yaal Buffer Blog ayaa qoray a qoraal weyn oo ku saabsan waxa ka dhigaya inuu faafo. Dhexdeeda, wuxuu falanqeynayaa qaar ka mid ah cunsurrada ka caawiyay hal qoraal gaar ah inuu helo in ka badan nus milyan jecel. Isaguba wuxuu tixraacayaa a warqad cilmi baaris oo xiiso leh oo ku saabsan waxa ka dhigaya waxyaabaha ku jira internetka inay fayras noqdaan.
Tags: sharebadhamada wadaagwadaag qodobadawaxyaabaha la wadaagi karola wadaagomaadada fayraskasuuq-geynta faayraskaistaraatijiyad fayras ah
Qorista Ma Nuugto, Waxay U Baahan Tahay Layli